असाध्यै भाग्यमानी हुन्छन् यस्ता ६ गुण भएका युवतीहरू !
शास्त्रमा मानवीय जीवनका पक्ष बारे विभिन्न किसिमका वर्णन गरेको पाइन्छ । हाम्रो समाजमा पनि शास्त्रीय मान्यतालाई अहिले पनि सत्य मानिन्छ । हरेक मान्छेमा छुट्टा छुट्टै गुण, स्वभाव हुन्छन् । समुन्द्र शास्त्रमा शारीरिक अङ्गको बनावट तथा रूप रेखा हेरेर मानिसको भाग्य, स्वभाव र गुणको बारेमा वर्णन गरिएको छ । जसले गर्दा हरेक मान्छेको भाग्य पनि फरक फरक हुन्छ । जसकै आधारमा कुनै व्यक्तिको भविष्यबारे पनि बताइन्छ । शिव पुराणमा कुमार कार्तिकेयले मानिसमा यस्ता गुण बताएका छन् जुन गुण हुने ब्यक्ति सौभाग्यशाली, भाग्यमानी र शुभ फल प्राप्त गर्छन् । उक्त पुराणमा भाग्यमानी…
यसरी ढुङ्गा र इट्टाले हा’निएको थियो ज्ञानेन्द्र शाहीलाई
2019-09-28 2019-09-28 admin
चितवन, असोज ११ । शनिवार दिउँसो चितवन भरतपुरको चौविसकोठीमा ‘नेपालका लागि नेपाली’ नामक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नआएका भ्र’ष्टाचार विरोधी अभिय’न्ताको छविबनाएका ज्ञानेन्द्र शाही चितवन आएका थिए । कार्यक्रमलाई नेकपा सम्बद्ध विद्यार्थीहरूले बिथोले पछि उनी बा ३ ख ८४५८ नम्बरको माइक्रो बसमा चढेर ग्लोबल होटेलपुगे । उनलाई पछ्याउँदै नेकपाका का’र्यकर्ता होटेलमै पुगेर बसभित्रै शाहीलाई आ’क्रमण गरे । आक्र’मणकारीहरुले शाहीलाई ढुङ्गा र इट्टाले प्र’हार गरेका थिए । उनलाई तत्कालै कारमा राखेर चितवन मेडिकल कलेज पु¥याईएको थियो । त्यहाँको उनको सिटी स्क्यान गरिएपछि थप उपचारका लागि आज नै…
अर्घाखाँचीको सुपा देउराली मन्दिरमा सङ्कलन भएको दान, भेटीबाट दुई विद्यालय सञ्चालन
अर्घाखाँची, असोज ११ । सरकारले घोषणा गरेका १०० उत्कृष्ट गन्तव्य मध्ये अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका स्थित धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको सुपा देउराली मन्दिर पनि रहेको छ । मन्दिरमा आउने दर्श नार्थी बाट सङ्कलित भेटीले दुई विद्यालय सञ्चालन भएका छन् । २०० जनाभन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । सन्धिखर्क नगरपालिकाको खाँचीकोटमा रहेको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सुपा देउरालीलाई आस्थाको केन्द्र मानिन्छ । जहाँ विभिन्न ठाउँबाट दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरुको घुइँचो लाग्ने गर्दछ । यो मन्दिर सरकारले घोषणा गरेका १०० नयाँ गन्तव्यमध्येमा पर्न सफल भएको छ । दर्शनार्थीको चहलपहलका कारण मन्दिर…
चितवनमा यसरी निर्घा’त कु’टिए ज्ञानेन्द्र शाही (भिडियो)
असोज ११, २०७६, चितवन ।आफूलाई भ्र’ष्टाचार विरो’धी अभि’यन्ता भन्दै हिँडिरहेका ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाही चितवनमा कु’टिएका छन्। चितवनको चौबिसकोठीमा गर्न लागिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ स्थित ग्लोबल होटेलबाट बाहिरिने क्रममा उनीमाथि युवा विद्यार्थीले कु’टपि’ट गरेका हुन्। कु’टपि’ट बाट शाहीको टाउको, खुट्टा र शरीरका अन्य भागमा चो’ट लागेको प्रहरीले जनाएको छ । बा ३ ख ४५ नम्बरको माइक्रोबसमा चढेर बाहिरिने क्रममा रहेका उनीमाथि कु’टपि’ट गरिएपछि प्रहरीले उद्धार गरेर उप’चारका लागि चितवन मेडिकल कलेजमा पुर्याएको छ। शाहीका समर्थकहरूले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट विद्यार्थीहरुबाट कु’टपि’ट भएको दाबी गरेका छन्। शाहीको…
एनआरएन यूकेको इतिहासमै पहिलो महिला अध्यक्षमा पुनम गुरुङ…
लन्डन । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) युकेको अध्यक्षमा पुनम गुरुङ विजय भएकी छन् । गुरुङका प्रतिस्पर्धी शेर बहादुर सुनारलाई २ सय ३ मतले पछि पार्दै डेढ दशक लामो एनआरएन युकेको इतिहासमै पहिलो महिला अध्यक्ष बन्न सफल भएकी हुन् । मतगणनाको अन्तिम नतिजाअनुसार अध्यक्ष निर्वाचित पुनमले ४५५१ मत प्राप्त गरेकी छन् भने सुनारले ४३४८ मत पाएका छन् । को हुन् पुनम गुरुङ ? नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात संविधानले महिलाहरुलाई नेतृत्व वर्गमा पुर्याउन महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको छ । जसको कारण तथा सक्षम नेपाली महिलाहरु धेरै नेतृत्ववर्गमा रहेर आ–आफ्नो अनुभवहरु बटुलेरहेका छन्…
यस्तो आयो विराज भट्टको फिल्म ‘साङ्लो’को फस्टलुक पोस्टर
काठमाडौँ । अभिनेता बिराज भट्टको नयाँ चलचित्र ‘साङ्लो’को फस्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । पोस्टरमा अभिनेता भट्टलाई एक्सन अवतारमा प्रस्तुत गरिएको छ । एक्सन र मायाप्रेमको कथामा आधारित रहेको चलचित्र साङ्लोमा अभिनेता बिराज भट्टको मुख्य अभिनय रहेको छ । भट्टको साथमा पूर्व मिस नेपाल तथा नव अभिनेत्री निकिता चण्डक रहेकी छिन । सार्वजनिक पोस्टरमा बिराज बाहेक अन्य कलाकार अटाएका छैनन् । तेजबहादुर खड्काको लगानी तथा शिवम् अधिकारीको लेखन, तथामा बनेको फिल्ममा बिराज र निकिताका साथमा कामेश्वर चौरासिया, जयनन्द लामा, आर.पी पन्त, अमित गिरीलगायतको अभिनय छ। आँउदो फागुन ९ गतेबाट…
उडे अघोर बाबा, एयरपोर्टमा बाबाका फ्यानै फ्यान (भिडियो)
काठमाडौं । पछिल्लो केही समय यता सामाजिक संजालमा एक वृद्द बाबा निकै भाइरल बने । उनलाइ सबैले अघोर बाबाको नामले चिन्ने गर्छन् । मायामोहको जिवन त्यागेर अध्यातमिक जिवन बेतित गर्दै आएका भाइरल बाबा एकाएक सामाजिक संजालमा छाए । उनले गर्ने कुरा, बोल्ने शैली र पहिलेका कुराहरू खासगरी युवापुस्ताले धेरै मन पराउने गर्छन् । उनले बोलेका धेरै डाइलगहरू आजभोली सामाजिक संजालमा भन्दा पनी बाहिर पनी सुन्ने गरिन्छन् । लाइफ ड्यामेज, पत्तुर जस्ता उनले बोलेका थेगो फेसम छन् । उनै अघोर बाबा पछिल्लो समय पासपोर्ट बनेपछी उनको अब बिदेश यात्रा पनि सम्भव…
लगातार १ सय २४ घण्टा ३० मिनेट किताब पढेर बझाङ एक युवाद्वारा विश्व कीर्तिमान ।
बझाङ । बझाङ जिल्लाका एक युवाले सबै भन्दा धेरै समय किताब पढेर विश्व कीर्तिमान राखेका छन्। बझाङ जय पृथ्वी नगरपालिकाका ८ जोशीगाँउका मुकेश राज जोशीले लगातार १ सय घण्टा ३० मिनेट किताब पढेर कीर्तिमान कायम गरेका हुन् । उक्त अवधिमा उनले २२ वटा किताब पढेका हुन्।गनिजि इभेण्टको आयोजनामा उनले साउन ५ गते बिहान ११ : ३० बजे देखि पढ्न सुरु गरेका थिए । ६ दिन पाँच रात लगातार किताब पढेर उनले विश्व कीर्तिमान राखेका हुन् । १ सय २४ घण्टा ३० मिनेट सम्म जोशीले इतिहास, विभिन्न विभिन्न प्रख्यात व्यक्तिहरूको जीवनी…
प्रेमीसँग म’स्ती गरिरहेकी बुहारी’लाई रङ्गेहात भेटेपछि….भयो रामधुलाई (भिडियो)
काठमाडौँ। अहिले इन्टरनेट सामाजिक सञ्जालहरुमा एउटा भिडियो एकदमै भाइरल भइरहेको छ ! उक्त भिडियो भारतको हिमाल्चलमा भएको घटना हो ! उक्त भिडियोमा एक जना युवकलाई केही जना मानिसहरू मिलेर बाटोमै कु’टपि’ट गरेका छन् ! उक्त कु’टपि’टमा सबै भन्दा सक्रिय एकजना युवती रहेकी छिन ! ती युवक लाई सबै भन्दा सक्रिय भएर कु’ट्ने ती युवती नन्द भएको बताइएको छ ! जुन महिलासँग ती युवक भेट्न आएका थिए ! घटना हिमांचल प्रदेशको धर्मशालाको भएको भारतीय मिडिया आज तकले उल्लेख गरेको छ । कुटाइ खाने युवकको एक युवतीसँग प्रेम थियो र ती युवतीको…
बिरामी मृ’त्यु प्रकरण : मृ’त’कका भाइ भन्छन्, ‘जाममा परेर मृ’त्यु भएको होइन’
काठमान्डौ : नागढुङ्गाको लामो जाममा परेर एक बिरामीको मृ’त्यु भएको खबर बाहिर आइरहँदा मृ’त’कका भाइले भने बिरामी जाममा परेकै कारण मृ’त्यु नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै मृ’त’कका भाइ रामबाबु साहले दाइको मृ’त्यु जाममा परेको कारण नभएको बताएका हुन् ।बिगत २ वर्षदेखि दुवै मि’र्गौला फेल भइ डाइलिसिस गराइरहेका गौर नगरपालिका–७ रौतहटका ३५ वर्षीय रुपलाल साहको शुक्रबार बिहान ४ बजे मृ’त्यु भएको थियो । जनकपुरमा डाइलिसिस गराइरहेका साहलाई त्यहाँका डाक्टरले पाइप परिवर्तन गर्न भन्दै काठमाडौँ पठाएका थिए । बिहीबार साँझ जनकपुरबाट आमासँगै काठमाडौँतर्फ आएका साहको शुक्रबार बिहान ४ बजे…